Export	Small Business Development Center
Halxidhkii Of ™ dhoofisaa ayaa
DUNIDA KA GANACSIGA HA LOO LEFT BEHIND-!
Caalami noqosho waa sida qaadashada safarka wadada. Haddii aan roadmap ah shirkad ku lumen doono! The halxidhkii oo tababar u dhoofisaa ku bixisaa roadmap ah si ay u abuuraan fahamka suuqyada ganacsiga caalamiga ah iyo farsamo.
Baadhitaanada tirakoobyada ayaa muujinaya in 99% ganacsiyada yar yar waa la la'yahay 95% suuqa awoodooda. Isbedel wuxuu ku bilaabmayaa aad la…barashada ku saabsan dhoofinta, ka dibna ku hogaamiyay ganacsigaaga galaan dunida ka mid ah ganacsiga caalamka.
Waqtiga hadda waa, aad diyaar u tahay?
Faham geeddi-socodka dhamaystiran oo dhoofinta.
Baadh IP iyo sharci.
Fahamto waajibaadkaaga waafaqsanaanta aad sharciyeed ah ka Maraykanka. iyo aragtiyo caalami ah.
Baro waxa ku saabsan fursadaha maaliyadda la heli karo si dhoofiye cusub.
Faham isgaarsiinta dhaqanka iyo sababta ay muhiim u tahay guusha.
Yaa dhigan tahay in
Shirkadda kasta oo ka fiirsaneysa ganacsiga caalamiga ah hadda ama mustaqbalka.
Xirfadlayaasha Horumarinta Dhaqaalaha.
Xisaabaadka & Qareenka.
Bixiyaha kaste ee adeegga ganacsi oo doonaya in uu caawiyo ganacsiyada la ballaariyo caalamka.
Taariikhda iyo Waqtiga:
Minnesota State University, Edina Campus
7700 France Ave S, Edina, MN Tilmaamaha
Room No: 340
Macluumaadka Diiwaan- & Kharashka:
Dhimis diiwaangelinta Hore: $99 — haddii diiwaan November 20, 2015 habeenbadhkii
Qiimaha qadada waxaa ka mid ah & Xilliba International Daahfurka Plan
” Waxaan dhawaan ka qeyb galay seminar la yaab leh oo ku saabsan dhoofinta, The halxidhkii ee dhoofisaa ah. Waxaan ahaa xiiso tan ku kooban yahay oo aan shaqo u gaar ah si ay u dhoofiyaan maaliyadda, oo aan nidaamka oo dhan dhoofinta, A-to-Z. Wow! Ma waxaan u xiise! Oo anigu waxaan ka bartay wax badan, oo ay la socdaan oo kale ah 39 dadka waawayn ee qolka. Haddii aan doonayay in bilaabeen inay dhoofiyaan, oo dhan waxaan u baahan yahay in tixraac Daahfurka Plan International oo raac tallaabooyinka. Waxa ka muhiimsan, Oo waan ogahay in qiimaha badan si aan u dacwiyayay badan waxaan ahaa todobaadkii hore ahay.”
~ Pat Perrin Global Finance Manager, Xafiiska Gargaarka Business, State of Ohio
” The halxidhkii ee dhoofisaa ah” ahaa oo xiiso leh dhow oo aad u badan in ay fasalka tababar ah.”
~ Leya, Citybank
About jooga ah:
Abuuraha / Author – Halxidhkii Of ™ dhoofisaa ayaa
Ganacsaduhu A nolosha oo dhan, Elyse Erickson sahamisay tiro balaadhan oo ah ganacsi. Sida Agaasimaha Maaraynta ee Dhoofinta Xire, Ms. Eriksson oo la shaqeeya ganacsatada in ay galaan suuqyada caalamiga ah.
Inta lagu jiro inta badan iyada mustaqbalkiisa, Ms. Erickson ahaa milkiilaha laba shirkadaha warshadaha ku takhasustay waxyaabaha cement ku salaysan. Waxay sidoo kale Agaasimaha Tababarka ee Caalamiga ah ee Horumarinta Ganacsiga Center-Small Business Center ee Dallas, Texas.
Ms. Erickson heysta B.S ah. in design., Masters ah ee arrimaha bulshada iyo M.B.A ah. Maamulka International. Waxay helay magacaabista ah ee CGBP, Shahaado Global Business Professional.